Tilmaamaha Motorola One Vision oo xaday | Androidsis
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Motorola One Vision ayaa soo baxday, waana isku mid sida waxaa lagu arkay Geekbench horraantii toddobaadkan, taas oo ah nooca adduunka Motorola P40.
Hadda, faahfaahin cusub ayaa laga soo wariyay, markii ugu horreysay, by XDA-Horumarinta oo muuji faahfaahin dheeraad ah oo taleefanka ah.
Sida laga soo xigtay isha Motorola One Vision waxaa loo yaqaan 'Robusta2', isagoo xaqiijinaya inay dhaxal u tahay Motorola One iyo Motorola One Power, oo magacyadooda loo kala bixiyay 'RobustaS' iyo 'RobustaNote', siday u kala horreeyaan.
Qalabka waxaa ku shaqeynaya 9610nm Samsung Exynos 10 chipset, sida uu shaaca ka qaaday Geekbench, waxayna ku imaan doontaa 3 iyo 4GB RAM noocyo leh 32, 64, ama 128GB oo ah keyd gudaha ah.
Xogta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in moobilku yeelan doono qaraar ah 2,520 x 1,080 pixel FullHD + bandhigay iyo 21: 9 saamiga dhinacaisaga oo kale Xperia 1 iyo Xperia 10. Ma jiro wax xaqiijin ah oo ku saabsan cabbirka shaashadda, laakiin xogo hore oo la helay ayaa tilmaamaya in Motorola P40 ay leedahay shaashad 6.2-inji ah.
Terminal-ka wuxuu yeelan doonaa kamarad asaasi ah oo 48 MP ah, kaas oo tooganaya 12 xabadood oo xarago ah. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan kaamirooyinka labaad, laakiin Motorola ayaa la sheegay inay ka shaqeyneyso laba astaamood oo kamarad ah oo la yiraahdo "3D HDR Video" iyo "Exposure Long." Qeybta dambe ayaa loo maleynayaa inay u tahay sawirro iftiin hooseeya oo wanaagsan oo ay dareemayaasha ka soo qaadan karaan iftiin badan.
Himilada Motorola One ayaa lagu bilaabi doonaa iyadoo Android 9 Pie oo leh ladnaanta Dijitaalka iyo taageerada ARCore. Waxay sidoo kale la imaan doontaa astaamaha Motorola sida Moto Actions, Moto Display, iyo Face Unlock. Telefoonku wuxuu kaloo yeelan doonaa codka Dolby.
Lambarada taleefanka ayaa ah sidan soo socota: "XT1970-1", "XT1970-2" iyo "XT1970-3". Weli ma jirto wax xaqiijin ah, laakiin moodooyinka la soo sheegay waxaa ku jiri kara noocyada kala duwan ee reer Brazil iyo Hindida ee Motorola One Vision. Telefoonku wuxuu ku imaan doonaa buluug iyo dahab., laakiin waxaa jiri kara midabbo kale marka la bilaabayo.
Motorola One Vision ma noqon doonto taleefanka kaliya ee Motorola ee ay ku shaqeyso Exynos 9610. Soosaarayaasha XDA Waxay yiraahdaan waxaa jira mid kale oo magaciisa loo yaqaan "Troika". Waxa kale oo ay qaadataa 12MP oo sawir ah markii hore oo waxa lagu sii dayn doonaa Aasiya Baasifigga, Shiinaha, Bariga Yurub, Bariga Dhexe, iyo Latin Amerika. Dhawaan ayaa la ogaan doonaa magaca ganacsi ee uu xambaari doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Gawaarida Motorola One Vision waxay muujinayaan dareeraha 48MP, bandhig 21: 9, iyo inbadan
Sida loola wadaago booskaaga safarka Khariidadaha Google